छात्राहरुका लागि वितरण गरिने स्यानिटरी प्या’डमा पनि भ्र’ष्टाचार !
विराटनगर : सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि वितरण गरिने स्या’निटरी प्या’डमा पनि भ्र’ष्टाचार गरिन्छ, त्यो पनि महिला नगरप्रमुख भएको भरतपुर महानगरपालिकामा नै ! भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।
करिब २० लाख रुपैया महँगोमा स्या’निटरी प्या’ड किनेर मिलेम’तोमा रकम बाँ’डफाँड गर्ने तयारी महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गर्न लागेको महानगर स्रोतले जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल मेयर हुनुहुन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले महिलालाई वितरण गर्न स्यानिटरी प्याडको सप्लाई र डेलिभरीको बोलपत्र आ’व्हान गरेको थियो । ६ वटा सप्लायर र उद्योगहरुले सो बोलपत्रमा अनलाइन बिडिङ गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ अनुसार सबैभन्दा कम दररेट हाल्नेलाई आशयपत्र दिनुपर्नेमा पाँचौ नम्बरको महँगो बोलपत्र विडिङ गर्ने कम्पनीलाई भरतपुर महानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौ’ताका लागि २०७७ साल फागुन २७ गते सूचना निकालेको छ ।
करिब २० लाख महँगो दरमा बिडिङ गर्ने सो’फ्टी हा’ईजिन प्रा.लि.संग भरतपुर महानगरपालिकाले स्या’निटरी प्या’ड खरिद गर्न लागेको छ ।
स्या’निटरी प्या’डका लागि ज्यासमिन हा’इजिन प्रो’डक्टस्ले ५६ लाख ५३ हजार ६ सय ५२ रुपैया, लाइफ केयर स्या’निटरी एण्ड ने’प्किन उद्योग एण्ड सप्लायरले ५७ लाख १३ हजार १ सय ६४ रुपैया, जयमाता दि स्यानिटरी उद्योगले ५९ लाख ११ हजार ५ सय ३८ रुपैया र हे’ल्पिङ मल्टि’पर्पस प्रालिले ६३ लाख ४७ हजार ९ सय ६० रुपैयाको टेन्डर हालेको थियो ।
यसैगरी सो’फ्टी हा’इजिन प्रालिले ७५ लाख ५८ हजार ४० रुपैया र राचेल इण्टरनेशनलले ७८ लाख ९५ हजार २ सय ७५ रुपैयाको दरभाउ पत्र बुझाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा सस्तो मूल्य राखेको जासमिन हाइ’जिनले टे’ण्डर पाउनुपर्ने हो । उसको योग्यता, क्षमता र सारभूत रकम नमिलेको भए दोश्रो कम मूल्य राखेको लाइफ केयर स्या’निटरीले ठे’क्का पाउनुपर्ने हो ।
तर, दोश्रो कम मूल्यको ठेक्का हाल्ने मात्र होइन तेश्रो जय माता दि स्यानिटरी उद्योग र चौथो हेल्पि’ङ मल्टि’पर्पसलाई पछि पार्दै करिब २० लाख रुपैया बढी ठेक्का रकम हालेको पाँचौ नम्बरको सोफ्टी हाइजिन प्रालिले ठेक्का हात पारेको छ ।
उसलाई स’म्झौताका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी बोलाएको छ । तर, भरतपुर महानगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र पौडेलले भने अहिलेसम्म कसैलाई सम्झौ’ताका लागि नबोलाएको बताए ।
उनले १० महिनाका लागि टे’न्डर आव्हान गरिएकोमा आर्थिक वर्ष बित्न ४ महिना मात्र बाँकी रहेकाले बोलपत्र बारे पुन’र्विचार गरिने बताए । उता बोलपत्रमा संलग्न सप्लायर्स र उद्योगहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सम्झौता गरिए अ’ख्तियार दुरु’पयोग अनुस’न्धान आयोगमा उजुरी गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
सबैभन्दा सस्तोमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउनेले ठेक्का पाउनुपर्नेमा योग्यता, क्षमता र कागजपत्र नमिलेको भए दोश्रो, तेश्रो वा चौथोले पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ६ वटा स’प्लायर्स र उद्योगले अनलाइन बोलपत्र हालेको अवस्थामा ४ वटा बोलपत्रदाताको योग्यता र कागजपत्र नपुगेको भए बोलपत्र आव्हान नै रद्द हुनुपर्ने हुन्छ ।
न्यूनतम ३ वटा बोलपत्र नहालेको अवस्थामा टेण्डर गर्न नपाइने सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले स्यानिटरी प्याड सम्बन्धी १२ बुँदे न्यूनतम मापद’ण्ड तोकेको छ । न्यूनतम मापदण्ड नपुगेको सप्ला’यर्स र उद्योगले टेण्ड’र नै भर्न नपाउने स्थिति छ ।
यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा स्या’निटरी प्या’डको वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि अनुगमन गर्न स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति नै गठन गरिएको हुन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा उप–प्रमुख पनि महिला नै हुनुहुन्छ । पार्वती शाह ठकुरी संयोजकत्वको स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुले प्रयोग गर्ने स्यानि’टरी प्या’डमा भ्रष्टा’चार गरिनु अर्को बि’डम्बना भएको छ । यो समाचार न्युज २४ मा तारा आचार्यले लेख्नुभएको छ ।
२०७७ चैत्र १४, शनिबार २२:३५ गते 1 Minute 378 Views